Dhagax dixeed 2, Xilliga jibbaarada 2 iyo dhagax dixeed, oo diiradda lagu saaray isboortiga | Wararka IPhone
Dhagax dixeed 2, Xilliga loo yaqaan 'Pebble Time 2' iyo 'Pebble Core', waxay diiradda saareen isboortiga
Pebble waxay soo saartay alaabteeda cusub, wayna u samaysay sidii ay umuuqatay inay kaliya ogtahay sida loo sameeyo: iyada oo loo marayo mashruuc Kickstarter ah. Isaga oo adeegsanaya barxaddan ay dadka ku uruurinayaan, wuxuu na siinayaa seddex badeecadood oo cusub: Dhagax dixeed 2, Xilliga loo yaqaan 'Pebble Time 2' iyo 'Pebble Core'. Laba smartwatches iyo qalab yar oo kuu ogolaanaya inaad dhageysato muusikada isla markaana aad kormeerto dhaqdhaqaaqa jirkaaga isla waqtigaas. Pebre wuxuu sii wadaa inuu sharad ku bixiyo bixinta faa'iidooyinka aasaasiga ah ee ka qiimo badan xiisaha iyo qaddarinta: batariga ka badan usbuuc.
1 Jibba 2, fudeyd qiimo tartan ah.
2 Xilliga jibbaarada 2, oo leh shaashad midab leh iyo batari badan
3 Pebble Core, oo mobilka uga tagaya guriga
4 Saddex sharad, isla falsafad
Jibba 2, fudeyd qiimo tartan ah.
Iyada oo leh midab isboorti oo aad u badan, Pebble 2 wuxuu hayaa naqshad aad u la mid ah tii hore ee Pebble, inkasta oo aad loo sii safeeyey.. Shaashad khad elektaroonig ah oo madow iyo caddaan ah oo ka wanaagsan tan ka soo horjeedda, dareemayaasha garaaca wadnaha isku dhafan, makarafoon, nashaadaadka iyo dareemayaasha hurdada, iska caabbinta biyaha oo gaaraya illaa 30 mitir iyo batteri noo oggolaanaya inaan isticmaalno illaa 7 maalmood. Waqtigan xaadirka ah qiimaha aaladan hadaan iskaqorno mashruucaaga Kickstarter wuxuu noqon doonaa $ 99 oo ay kujirto kharashka dhoofinta wuxuuna imaan doonaa bisha Sebtember.
Xilliga jibbaarada 2, oo leh shaashad midab leh iyo batari badan
Nooca kale ee nala siinayo wuxuu adeegsadaa naqshadeynta Waqtiga Dhagaxleyda oo leh horumarin sida 53% shaashad ballaaran, wadaagista inta ka hartay qeexitaanka Pebble 2 (dareeraha wadnaha, dareemayaasha firfircoonida iyo hurdada, makarafoonka iyo iska caabbinta biyaha) laakiin sidoo kale wuxuu hagaajiyaa batteriga, gaaraya ilaa 10 maalmood oo ismaamul ah. Qiimaha sarrifka ayaa ka sarreeya, oo gaaraya $ 169 oo ay ku jiraan kharashka dhoofinta. Waxay sidoo kale imaan doontaa goor dambe: laga bilaabo Nofeembar.
Pebble Core, oo mobilka uga tagaya guriga
Maaha xayeysiis Cuatro, laakiin waa aalad ay ku qaadato orod iyo inay awoodaan inay uga baxaan moobilka guriga. Pele Core waa aalad yar oo aan lahayn shaashad ay ku jiraan nidaamka hawlgalka Android iyo dareemayaal si loola socdo dhaqdhaqaaqaaga jimicsiga, oo ay ku jiraan GPS (laakiin aan ahayn garaaca wadnaha). Waxay leedahay xasuus gudaha ah 4GB si aad u keydiso muusikada waxaadna u isticmaali kartaa Spotify si aad u sii qulqusho (illaa intaad haysato koontada Premium) iyada oo ay ugu wacan tahay isku xirnaanta 3G Waxay kaloo leedahay isku xirnaanta Bluetooth iyo WiFi. Isaga oo adag ayaa hadda ah $ 69 wuxuuna imaan lahaa bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
Saddex sharad, isla falsafad
Dhagax dixeed wuxuu leeyahay fikrado cad cad wuxuuna wali aamin ku yahay fikradiisa ah sameynta aalado bilaa faan iyo batteri aan laga adkaan karin Qiimaha Pebble 2 wuxuu ka dhigayaa mid ka sii duwan kuwa xiisaha leh kuwa doonaya inay yeeshaan kormeeraha dhaqdhaqaaqa, maaddaama qiimahoodu ku dhow yahay with 100 oo leh astaamo ka yar kuwii ay bixiyeen Dhagax dixeed 2. Sharadka Pebble Core sida aan qabo waa mid aad u khatar badan. Kormeeraha jimicsiga oo aan lahayn kormeeraha heerka garaaca wadnaha wuxuu ila muuqdaa inuu yahay mid aan waxtar yar lahayn xilligan, si kasta oo aad u dhageysan karto muusikada. Waxaad ku haysaa dhammaan macluumaadka Kickstarter
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Dhagax dixeed 2, Xilliga loo yaqaan 'Pebble Time 2' iyo 'Pebble Core', waxay diiradda saareen isboortiga
Valvaro Viñuela dijo
Waxaa jira qalad yar, Luis: Kharashka dhoofinta kuma jiraan qiimaha ololaha Kickstarter, ugu yaraan u rarista Spain.
Jawaab Álvaro Viñuela
Xaq, waxaan ogaaday goor dambe: $ 15
IOS 9.3.3 waxay u nugul tahay JAILBREAK laakiin ma awoodno inaan ku raaxeysano